Shirkadda (PETRO AFRICA Ltd) Oo Heshiis Horay Ulagashay (BP Tanzania Ltd) Ayaa Bilowday Dhismaha 38 Shidaale Cusub. – Codka Qaranka Tanadland
Shirkada (PETRO AFRICA Ltd) waa shirkadda ugu weyn shirkaddaha ka ganacsada gaaska, naaftada iyo badroolka shirkaddaha Soomaalida.Weriye, Saxardiid.
Shirkaddaha shidaalka ka ganacsada ee soomaalidu ay ku leeyihiin (Bariga Afrika) waxaa ugu dhaq-dhaqaaq roonaa in mudaa wadamada Tansaaniya iyo Uganda. walow ay shirkadda ugu weyni ahayd shirkadda (Petro Africa) oo shidaalka maraakiib kula soo degta lehna haamo waaweyn oo ay ku kaydiso. inkasta oo haamaheedu ay ku yaalaan hareeraha magaalada (Daresalaam). (Petro Africa) xadi badan oo shidaal ah ha soo dejiso balse shidaaleyaasheedu ma ay badnayn waxayna ahaayeen 12 shidaale. dhamaantoodna ku yaala magaalada (Daresalaam) iyo hareeraheeda.
Shirkadda (Petro Africa) waxaa in mudo ah caqabad ku ahayd helitaanka haamo maraakiibtu ay shidaalka ugu shubaan oo ku filan dekeddana ku yaala. sida aan warka ku helayna shirkadda (Petro Africa) waxay caqabaddaas ka gudubtey sanadkii ina dhaafay ee 2010 -ka bilihiisii ugu danbeeyey, markaas oo ay heshiis modo dheer ah kulagashay shirkadda (BP Tanzania Ltd) in ay ka kireysato haamaha waaweyn ee shidaalka kaydiya maraakiibtuna ay shidaalka ku shubaan.
Heshiis kaasina wuxuu suurogeliyey in ay (Petro Africa) is balaariso oo ay magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalka (Tanzania) ay ka furato xarumo shidaaleyaal ah, laguna iibiyo shidaalka, waxyaabaha batroolka laga sameeyo sida naaftada iyo noocyada kaladuwan ee olyooyinka. shirkadda (Petro Africa) isla dabayaaqadii sanadkii hore ayey dhul cusub ka iibsatey magaalada (Daresalaam) oo ay shirkaddu 12 xarumood horey ugu lahayd. Waxay kaloo dhul ka iibsatey 7 magaalo oo kale kanamid ah 26-ka magaalo madax ee ay ka koobanyihiin gobolada dalka Tanzania. magaalooyin kaas oo kala ah 1) [Chalinga], 2) [Morogoro], 3) [Kahama], 4) [Tabora], 5) [Iringa], 6) [Mbeya], 7) [Mwanza]. xarumaha shidaaleyaasha ay ku talojirto shirkadda (Petro Africa) in ay sanadkaan aynu ku jiro ee 2011-ka ebido tiradoodu waa 38 shidaale. waxayna isugu jiraan qaar hada la dhameeyey oo shaqaynaya iyo kuwo uu dhisme ku socdo.
Wadanka Uganda shidaaleyaasha ugu badan waxaa iska leh beesha beelaha (Dhulbahante) ugu shirkaddaha iyo dhaqaalaha badan ee (Bah-Ararsame), oo hanti farabadan dalka (Uganda) ku leh gaar ahaan magaalada (Kampala). halka ganacsatada reer Tanadland oo aad ugu yar magaalada (Kampala) ay ku leeyihiin 1 shidaale oo qura. laakiin wadanka (Tanzania) oo ay ganacsatada reer Tanadland ku badanyihiin, shirkadihii ugu horeeyey oo ay soomaalidu wadanka Tanzania ka samaystaana iyagu ka abuuray 1960 -kii ka hor. waxaa la oran karaa shirkadda hada la balaariyey ee (Petro Africa) waxaa u ganacsigeedu gaarey heer uusan gaarin beecmushteriga qawmiyadaha kale ee dalka Tanzania kula nool Soomaalida sida, (Carabta), (Hunuudda), (Sawaaxiliga) iyo dadyowga barxan ee u asalkoodu kala duwanyahay intaba.
Maxaa yeelay, shirkadda (Petro Africa) marka hada ah iyada oon weli la dhamaystirin 38-da shidaale ee cusub intoodii badnayd. ayey noqotay shirkadda ugu shidaaleyaasha badan shirkaddaha wadaniga ah oo gaarka loo leeyahay. shirkadda (Petro Africa) marka ay ebido mashruuca balaarinta waxay noqonayaan wadarta tirada shidaaleyaasha shirkaddu 50 Shidaale. sida aan ka warhelay shirkadda (Petro Africa) waxay abuurtay fursado aad u qaali ah oo loo baahanyahay in ay ka faa’iideystaan maalgeliyeyaasha reer Tanadland.
Maxay tahay Fursadda Ay Abuurtay Shirkadda (Petro Africa) Ee Loo Baahanyahay Inay Ka Faa’iideystaan Maalgeliyeyaasha Reer Tanadland?.
Shirkadda (PETRO AFRICA) bacdamaa ay ku talojirto in ay soodejiso shidaal xadi farabadan, shirkaddu waxay u baahantahay gaadiidka haamaha shidaalka qaada ay saaranyihiin oo ilaa 500 oo gaari ah. gawaaridaas oo la rabo si aan kala joogsi lahayn in ay shidaalka shirkadda (Petro Africa) u geeyaan 5 wadan oo ay magaalada (Daresalaam) deked u tahay sida, 1) Uganda, 2) Ruwanda, 3) Burundi, 4) Zambia, 5) iyo bariga dalka Zaire. waxaa kaloo gaadiidkaas loogu baahanyahay in ay shidaalka si joogto ah ugu geeyaan shidaaleyaasha shirkadda (Petro Africa) iyo shidaaleyaasha kale ee ku kala yaala gobolada iyo degmooyinka dalka Tanzania.
Marka hada ah wadanka Tanzania 23 nin oo reer Tanadland ah ayaa gaadiidka xamuulka qaada ku leh. Gaadiidka ay haystaan oo dhanna hadii haamo lawada saaro waa 82 gaari oo 64 ka mid ah laga leeyahay magaalada (Daresalaam). Marka waxaa maalgeliyeyaasha reer Tanadland u furan fursad ah in ay gaadiid kala soodegaan magaalada (Daresalaam) ayna qandaraas mudo dheer uga qaataan kuna wareejiyaan shirkadda (Petro Africa) si macaash buuran oo joogto ah ay uga helaan kamid ahaanshaha gaadiidka xamuulka ee shirkadda (Petro Africa).
Marka hada ah wadanka Tanzania 23 nin oo reer Tanadland ah ayaa gaadiidka xamuulka qaada ku leh. Gaadiidka ay haystaan oo dhanna hadii haamo lawada saaro waa 82 gaari oo 64 ka mid ah laga leeyahay magaalada (Daresalaam).. Weriye: Saxardiid
Arinta kaleeto ee muhiimka ah in maanka lagu hayo waxa weeye, marka kaalimaha shidaaleyaasha faracyadoodu ay labaatameeyo kor u dhaafaan sida lagu yaqaan shidaaleyaasha caalamka. maaha oo keliya meel gaadiidka sahayda looga qaato. ee waa suuq gaadiidka iyo dadka socotada ahiba ay ka helikaraan waxyaabaha daruuriga ah oo ay u baahanyihiin. sida maqaayad, qalabka dayactirka gaadiidka, cabitaan qabow iyo mid kulul, dhar, kabo IWM. waxayna u noqon kartaa fursad dahabiya shirkadaha reer Tanadland ee ka ganacsada alaabta bagaashka ah iyo kuwa qalabka dayactirka gaadiidka, in ay heshiis waxwadaqabsi la galaan shirkadda (Petro Africa). iyaga oo waliba adeegsanaya shirkaddahooda sumaddooda oo muujinaya ganacsiga xarumaha (Petro Africa) inay yihiin suuqyo shirkaddo badan kulmiya oo dadku ay badeecooyin farabadan ka helikaraan.
Ururka midnimada umada Tanadland markuu bixiyey halkudhiga qaranka ee hada caanbaxay oo ah “Tacab iyo Tacliin” ma’uusan ahayn hadal si dhayal ah ku yimid, ma’aysan ahayn hawraar umada lagu dhiirigelinayo oo qura, ee wuxuu ahaa “halkudhig” ka tarjumaya kalsoonida laguqabo umadda Tanadland waxay ku qabsankarto midnimada iyo iskuduubnaanta soojireenka ah ee ay dhaqanka u leeyihiin.
Halkudhega ah “Tacab iyo Tacliin” macnaha uu xanbaarsanyahay oo ka danbeeyana waxa weeye midnimada danaheena oo dhan baa ku xiran, midnimo la’aanteedna wax inoo suurtogelaya ma’ay jiraan. marka walaallayaal waa lamahuraan in uu hadafkeenu mideysnaado, taladeenu in ay mideysnaato oo aynu wax isla qorsheyno, sanuuddeenu in ay isugu keenjirto oo aynu ahaano umad ay wax isugu jiraan oo leh barwaaqo-sooran. Markaas waxaa noo sahlanaanaysa ku jiheynta kaydka maaliyadeed ee umada Tanadland abuuritaanka ilo waxsoosaar oo tiro iyo tayaba leh.
Halkani Waa Codka Wadaniga Xalaasha Ah Ee Umada Karaamaysan Ee Qaranka Tanadland, By: Saxardiid Xareed Bulxan.
Fadlan halkaan hoose tuuji hadii aad rabtid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan hawlaha ay qabato shirkadda [Petro Africa]. www.petroafricatz.com